बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर – Health Post Nepal
चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय सर्वेक्षण (ओएनएम) को नाममा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्नलागेको रहस्य खुलेको छ। अस्पताल प्रशासन पक्षले पुरानो दरबन्दीलाई काटेर आफू अनुकल नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजेको अस्पताल स्रोतको आरोप छ। अस्पताल प्रशासनले...
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ। १७ महिनादेखि रिक्त पदमा सोमबार बसेको क्याबिनेटले ६ जनालाई नियुक्त गरेसँगै सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा. कैलाश भण्डारी,...
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षमा डा. निर्मल लामिछाने
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा. निर्मल लामिछाने नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले लामिछानेलाई वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले डा....
भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा आएको छ । सरकार र अस्पतालको संयुक्त लगानीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त उपकरणसहितको अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालले एकैपटक ८ वटा मोडुलर अप्रेसन कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको...
चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीसेवा सुरु गरेको छ । फार्मेसीका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेको ८ महिनापछि अस्पतालले सेवा सुरु गरेको हो । बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको फर्मेसीले बिरामीलाई निकै राहत दिने अस्पतालका कार्यकारी...
‘क्यान्सर प्रतिष्ठान’का विषयमा किन बोल्दैनन् प्रचण्ड ?
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरलाई ‘क्यान्सर प्रतिष्ठान’ बनाउने योजना अस्पताल सञ्चालक समितिको छ । २१ पुस ०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अस्पताललाई क्यान्सर प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउनका लागि अस्पतालमा कार्यरत...